Banyere Anyị - Hangzhou Better Daily Products Co., Ltd.
Mma Ngwa Ngwaahịa Co., Ltd.
E guzobere na 2015. Anyị bụ ndị a ụlọ ọrụ aku OEM na ODM mmepụta nke kwa ụbọchị-eji ngwaahịa.
Ọkachamara ọkachamara na-ehichapụ mmiri.
Anyị na-elekwasị anya na nyocha na mmepe, mmepụta na ire nke nhichapụ mmiri nke ụdị dị iche iche. Anyị mmiri na-ehichapụ edemede gụnyere mmanya wipes, disinfection wipes, ihichapụ wipes, etemeete remover na-ehichapụ, nwa na-ehichapụ, ụgbọ ala, wipes nke anụ ụlọ, kichin ekpochapụ, ihicha ekpochapụ, ihu wipes, wdg N'otu oge ahụ, anyị nwekwara ngwaahịa usoro dị ka ihe nhicha aka na ihe nkpuchi. Anyị na-enye ọrụ ndị ahaziri maka ndị ahịa anyị. Anyị na-elekwasị anya na azụmaahịa atọ dị iche iche na-ewetara ndị ahịa anyị ọkwa dị elu dịka ụlọ ọrụ kemịkalụ ndị ọzọ. Corporatekpụrụ ụlọ ọrụ anyị bụ "Nchedo, R&D na Ọrụ".
Nzere zuru oke.
Anyị nwere ikikere na mbupụ akwụkwọ ikike. Ikike mbupụ ngwaahịa anyị bụ nke enyere. E debara aha anyị na EPA, FDA, MSDS, EN, CE na asambodo ndị ọzọ. Ọ bụrụ n’inwere ihe asambodo ndị ọzọ, anyị dị njikere ka gị na gị mezue;
A na-ebupụ ngwaahịa anyị n'ụwa niile. Anyị na-agba mbọ inye ngwaahịa na ọrụ dị mma maka akara ọ bụla.
Ngwaahịa kachasị mma kwa ụbọchị Co., Ltd. nwere otu ndị na-ekpo ọkụ na ndị enyi nwere ndị ọkachamara nwere ahụmahụ na mmepụta, ahịa, njem mba na njikwa izugbe, abụọ n'ime ha nwere ihe karịrị afọ 10 nke ahụmịhe ọrụ ọkachamara. Anyị enwetawo otuto dị ukwuu site n'aka ndị ahịa maka ọrụ anyị ngwa ngwa ma na-eche echiche n'ihi ngwaahịa anyị dị elu na ndị ahịa na-arụsi ọrụ ike.
AKW providesKWỌ na-enye ọmarịcha ọrụ ọrụ yana ụkpụrụ anyị nke ntụkwasị obi, iguzosi ike n'ezi ihe na agụụ maka ogo. Nke a bụ ihe mere ọtụtụ ndị ahịa anyị jiworo na-eguzosi ike n'ihe ruo ọtụtụ afọ. Anyị arụgoro ezigbo ọrụ.